Ra’iisal Wasaaraha Soomaaliya oo xerada Xalane kulan kula yeeshay beesha caalamka + Sawirro – Balcad.com Teyteyleey
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa shir guddoomiyay kulan looga hadlayay fulinta qodobadii ka soo baxay shirkii London ka dhacay bishii la soo dhaafay.
Kulankan oo ka dhacay xarunta Xalane ayaa waxaa ka soo qeyb galay Wasiiro ka tirsan Xukuumadda, Ergeyga Qaramada Midoobey u qaabilsan Soomaaliya Micheal Keating, Safiirka UK u fadhiya Soomaaliya David Concar iyo Ergeyga Midowga Afrika ee Soomaaliya Francisco Madiera iyo wakiilada beesha Caalamka u jooga Soomaaliya.
Ra’iisul Wasaaraha ayaa sheegay in shirkii London uu ahaa mid guulo waa weyn soo hoyay, isla markaana waxaa uu tilmaamay in loo baahan yahay in la fuliyo dhamaan qodobadii ka soo baxay.
Qodobada muhiimka ah ee shir diiradda lagu saaray waxaa kamid ah dib-u-dhiska Ciidamada Qaranka oo qeyb ka ahaa qodobka ugu muhiimsanaa ee shirkan London looga hadlay, kaas oo horey dawlada dhexe iyo maamulada Federaalka ku heshiiyeen qaabkii dib u dhiska loogu sameyn lahaa ciidanka Qaranka.
Sidoo kale waxaa laga hadlay sidii wadajir looga shaqeyn lahaa taaba gelinta heshiiska Shirkii London, gaar ahaan qeybaha Amniga quseeya.
Waxaa lagu wadaa inay dhowaan dhacaan shirar kale oo gaar gaar ah, kaasoo looga arrinsanayo waxyaabaha ka hirgalay qodobadii ka soo baxay shirka London, iyadoo guddiyo heer wasiir ah ay arrintan kala hadli doonaan Beesha Caalamka.
The post Ra’iisal Wasaaraha Soomaaliya oo xerada Xalane kulan kula yeeshay beesha caalamka + Sawirro appeared first on Ilwareed Online.